About ICO: Ndiani akaunganidzawo kupfuura mari panguva chiratidzo okutengesa - Blockchain News
Mumakore gore, ICO yaiva nzira zvikuru nevanhu pakurera mari. Asi nyanzvi dzinotaura kuti tichaona yakasiyana zvachose nzira pakuitisa chiratidzo okutengesa mu 2018. Zvino ngatitarise kuyeuka iyo mabasa akaunganidzawo zvikuru mari panguva ICO-dzimwe nguva, mune masekonzi mashoma.
EOS – The Most Yakasimba Infrastructure nokuda Decentralized Applications
Kupfuurisa $700 miriyoni yaunganidzwa. ICO achiri kuenda mberi
EOS ari decentralized chikuva kuti Developers ose decentralized mafomu. The musiki EOS ndiro Dan Larimer. Iye inonziwo muvambi BitShares, Steem, uye BitUSD.
Zvinokosha kucherechedza kuti Developers vakasarudza kuitisa fundraising kusvikira June 2, 2018. Ndiwo wandei nguva kuti zvirongwa zvakadai. Pakapera October, panguva Launch Scale 2017 musangano Brock Pearce akataura kuti EOS kuti ICO akanga kukwezvwa rinenge $700 mamiriyoni 345 mazuva, uye akanga asiri pokupedzisira. Maererano Pearce, ICO ichi vachaungana zvinopfuura $1 bhiriyoni isati yapera.
Chikuva kuvhiyiwa blockchain pamanyorerwo yacho uchishandisa marongedzero Developers. Chinangwa chikuru ndechokuti kuvandudza kunyatsoshanda mashoko dzemuchina dzakaitawo (hakuna muganhu pakukwana, uye zvinogonekwa akadaro gadziriro dziri shoma chete ne pfungwa dzevanhu) uye kugadzirisa dambudziko blockchain scalability nokuwedzera kuwanda vanoshandisa mamiriyoni uye kumhanya kwema mamiriyoni muzana wechipiri kuburikidza inofambirana Masvomhu uye date kugadzira. Pfungwa Idzi fadza. Nemambure inoshanda achapiwa kwakaitika DPoS (Kupa Uchapupu wehoko). ndiko, zvakafanira kuchengeta chikwama wako dzimwe mari dzose nguva yokuti kutengeserana azviise blockchain. A kongiri mufananidzo hazvigoni akapa izvozvi, asi wakati vakaongorora nheyo Pos mugodhi, zvinova pachena kuti zvakawanda mari vari chamuinacho, zvikuru mikana une kuwana chidhina. Nzira iyi zvakanaka akaratidza mune pasocial network Steemit, apo avhareji nguva kuzosimbisa kutengeserana ndiko vakaroorana mumasekonzi.
FileCoin – A Decentralized Market nokuda Data Storage
$257 miriyoni yaunganidzwa
FileCoin ari decentralized samambure pamusoro yayo blockchain kuti mashoko okuchengetera uye kugadzira. Pfungwa samambure kwacho kunogona kuenzaniswa mugodhi; musiyano chete ndiye kuchikuva kuti mugodhi. Users zvinopa kuwana okuchengetera kwavo mukutsinhana FileCoins.
Pane nzira mbiri kushandisa samambure:
Clients kutenga gore okuchengetera kana kukumbira anodiwa mashoko kubva miners ari paIndaneti uye kubhadhara mabasa pamwe FileCoins.
Miners zvinopa vanoshandisa pamwe kuwana okuchengetera kwavo FileCoins.
FileCoin ane vakwikwidzi akadai Storj uye vaSia. The purojekiti wokutanga kunobva Ethereum uye ane matambudziko scalability, uye yechipiri rakanyatsojeka kunonoka uyewo. FileCoin anoshandisa yayo rezvebonde uye protocols kutaura vanoshandisa uye dzavo mashoko.
$232 miriyoni yaunganidzwa
Tezos chinhu chitsva decentralized kuzvidzora akakwanisa blockchain ezvinhu kuti pave zvechokwadi-digital munharaunda. The zvemichina hwezvekukurukurirana rongeka ongororo, izvo mathematically kunoratidza Kururama kushanda pamutemo remitemo uye anowedzera kuchengeteka zvikuru kusimba kana mari weighted ngwara zvibvumirano.
Nemamwe mashoko, ari Developers anosuma rinogona kutsiva Ethereum kunozivisa kwebhuku dzakati idzva nyanzvi uchishanda yakachengeteka ngwara zvibvumirano. The hurongwa nechinangwa kuzadzisa mabasa okugadzira, akadai pachena, chibatiso, uye nokukurumidza basa. The mutauro pachake kuti vakachenjera zvibvumirano, akadana Michelson, inopa chakarongwa ongororo hurongwa pasi musimboti kuti rinoshandiswa avhiyesheni indasitiri.
Pasinei akadaro akabudirira ICO, Chirongwa ichiri pakutanga chaipo ayo kukura nokuda zvimwe zvemukati kunetsana. The havaoni wekambani vakanonga zvimedu vakarwisana purezidhendi mari Swiss, izvo akapa fundraising, uye vanoita vachiri kumirira zviratidzo zvavo. Nepo vakawanda asingashiviriri ndivo kare nyaya kumatare akawanda pamusoro chirongwa.
$150 miriyoni yaunganidzwa
Bancor chinhu decentralized rezvebonde unokubvumira kuchengeta Ethereum zviratidzo uye nyore exchange muvira zvimwe zviratidzo pasina mapato wechitatu pagungano rwoga dzaona mutengo achishandisa nyore padandemutande chikwama.
Hwaro chirongwa chiri akazochena zvibvumirano uye hwakavandudzwa kumumvuri pamusoro Ethereum samambure kuti exchanges zviratidzo pavaigona kutora chikepe chaienda cryptocurrency exchanges. Hazvina kutsanya, vimbika, uye, chii chinonyanya kukosha, ngozi. Kwema zvinoitwa tichibatsirwa ngwara zvibvumirano. “Mashiripiti nhema masvomhu uye iri nyore inonyatsoita kuti anotenga otengesa nenzira kuti kugara liquidity pamisika anodzokororwa pasinei mavhoriyamu uye Exchange zvinyorwa,” ari Developers tsanangura.
The nebudiriro kambani vanopfuura 50 chiratidzo zvirongwa, kusanganisira Power Ledger, Wax Chiratidzo, KUGONA, uye nevamwe. Vakato vakabatanawo nemambure Bancor. Nine mudiwa zvirongwa vakatoratidza kusashanda zviratidzo zvavo uye vanogona kutenga nokutengesa navo kuburikidza Bancor kushanda. kunze BNT (Bancor Network Chiratidzo), kushanda inotsigira paEti, GNO, ENJ, BMC, IND, STX, chaAdryana, uye IQT. Achibatsirwa ngwara zvibvumirano, nemambure anotendeuka 20.7 miriyoni BNT ($58 miriyoni panguva avhareji mwero Bancor).
chinzvimbo – The Ethereum Mobile Os
$100 miriyoni yaunganidzwa
Zviri mararamiro itsva decentralized mafomu (DApps), iyo inopa vanoshandisa ane yakakunakira inowanikwa kuti kuwadzana gadziriro uyewo nevamwe vanoshandisa papuratifomu. Uyezve, gadziriro anogona vakazvimiririra aite mabasa ane chikwama, mumwe Browser, uye mungotaura. The yose zvichiitika decentralized uye, saka, njodzi uye vakatsanya.
Zvinofadza kuti Developers vari vachitamba munharaunda kukura chirongwa. ndiko, kuti Developers kupa mukana muridzi zviratidzo munzanga dzavo kuita sarudzo kuti chirongwa kukura pasinei nokuti ICO musimboti zvinoreva kusavapo kodzero dzakadaro.
Several decentralized mafomu wakatozviitirwa vakanyorwa zviri Status, kusanganisira Gnosis uye Aragon.
Gnosis (250,000 paEti akaunganidza) chinhu decentralized papuratifomu kuti zvichaitika. Semuyenzaniso, zvakafanotaurwa inogona zvainanga kukurukura vanhu vakakurumbira, muchikurukura journalistic, pre-okisheni iwe mabasa ounyanzvi, mitambo vachitamba, nezvimwewo.
TenX – Change uye Wana Virtual dzeEurope. nguva yose yose. kwose kwose
$83,1 miriyoni yaunganidzwa
The Singapore muripo kambani anoedza kushandisa cryptocurrencies sezvo nyore uye nyore sezvo kushandiswa Fiat mari. saka, vakapiwa mvumo kubva Visa uye Mastercard uye rakapa epurasitiki kadhi ravo. Mari akadzika kadhi iri $15, asi iwe unogona kurayira zvayo rakapotsa shanduro iri pamutemo Website uyewo. The kambani anovimbisa yakaderera basa yechikoro kushandisa basa kana mari iri pakadhi vasiri $1,000 pagore. Kana mari iri pakadhi kwazvo ichi pamwero, komisheni yechikoro Haingaropafadzwi mhosva.
mazuvano, gadziriro anoshanda bitcoin, apo neEteri nokuputsanya zviri namahwindo Beta muoti. Rutsigiro ERC20 vomureza zviratidzo zviri akatiwo, izvo zvinoreva kugarisana pamwe DGX, REP, VIMBA, OUMAMBO HWECHIPIRI, uye nevamwe. Chii kunakidza zvikuru ndechokuti unogona kubhadhara ane TenX kadhi chero amatura anogamuchira Visa uye Mastercard. Zviri aizobudirira chaizvo chirongwa zvinotsigirwa Vitalik Buterin.
Civic – Rakachengeteka Identity mararamiro
$33 miriyoni yaunganidzwa
Civic ndehwokuti kuvaka mararamiro inoshanda anopa mukana anodikamwa mashoko kudiwa. zvinoti, rine kuwana chitupa ongororo mabasa kuburikidza blockchain. saka, Civic achapa nyore uye yakachengeteka kuwana vanoshandisa 'pachake Data uye ongorora zivikanwo yavo.
Semuyenzaniso, boka rinopa vagari East Far kuitawo motokari SWEDERA, iyo ichaitwa chete ivo. Kana mutsigiri pamwe Civic, vanogona kuongorora kana vatori zvose ndivo vagari chikamu chino nyika.
Civic akatovaregerera kusunungurwa fomu kwayo digitaalinen kuzivikanwa papuratifomu, sevatsigiri Civic Akachengeteka Identity Platform (iOS VERSION chete).
$18.7 miriyoni yaunganidzwa
Aventus ibhuku kuumba uye kusimudzira matikiti kuti zviitiko siyana mune njodzi uye yakajeka nzira. The varongi yacho chiitiko hazviguti kudzora matikiti kuparadzirwa.
Chirongwa unobvumidza kuti uongorore zvakare musimboti tikiti pakugoverwa mu yechipiri mumisika uyewo kubvisa unregulated zvokushambadzira uye mabasa zvisiri pamutemo chokuita kutengeswa matikiti. With kwakadaro turusi, musangano vachakwanisa kumisa shoma uye kunonyanyisa mitengo nokuda matikiti uye akuteerere sangano ravo pamusika dzisiri, kuita yose muitiro yakajeka uye nokuenzanisira.
Nemamwe mashoko, chinhu ngozi ticketing hurongwa. The chikuru Basa Aventus nokuchinja pfungwa nokuparadzirwa tikiti uye kuti decentralized, izvo zvichaita kuti vatsigiri uye kushandiswa hurongwa kuti kutengesa matikiti kuti zviitiko rwoga uye kuwana basa nokuti.
Zvino isu achateerera zvakakwanirana vanobudirira Russian ICO zvirongwa.
MobileGo – The Second Gaming Revolution Runouya
$53 miriyoni yaunganidzwa
Broadband Internet mukana akachinja nyika mitambo. Single mishandirapamwe vari bhowa, uye vatambi vanoda kukwikwidzana mumwe panguva chaiyo. Mabikirwo blockchain achaita yechimurenga multiplayer uchitamba mutambo wacho: zvino cybersport makwikwi yauchawana vose. Urwu rwatova kuwanikwa ne ngwara chiratidzo MobileGo, izvo zvichaita kuti mamiriyoni vatambi kubva munyika kuti tibatane decentralized Tournaments uye P2P machisi.
Kuti akariisa ngaatarire, kuti Developers kuda kuwedzera miganhu zviitiko e-mitambo, izvo zvichaita kuti vatambi vose kubatanidzwa makwikwi ari zvakaenzana mashoko. Vatambi achapiwa mubayiro vamwe kubudirira vane mari mibayiro.
Russian Mining Center – zvipuka zvine masero akawanda Mining
$43 miriyoni yaunganidzwa
The Russian vakabata kambani paanounza migodhi nzvimbo muRussia, anovandudza yakasiyana uye zvemberi miners, akadana Multiclet, uye pave Sunrise miners.
The chikuru budiriro Pfungwa chirongwa ichi kuti pave "ASIC nemishonga" mucheri kuti zvichaita kwangu munhu cryptocurrency, semuyenzaniso, Ethereum, kanoverengeka zvakanyanya kukunda Graphics makadhi uye kushandisa shomanana simba. zviratidzi vakadaro vakaronga kuitwa kuburikidza kukura zvipuka zvine masero akawanda processor, hwuchavapano pasi akafanana chinobva vakagovera kadambari ane Graphics kadhi Chip.
mazuvano, kambani anogovera Sunrise ASICs nezvavatorwa Bitfury Chips. Kukura wechipfuwo kadambari processor achatora anenge gore. The purojekiti anogona kunzi yokuRussia yechimurenga migodhi.
dzi mararamiro – The Grocery Industry, Reinvented
$42.1 miriyoni yaunganidzwa
startup Iri yokutanga munyika yose decentralized mararamiro unobatanidza vaburitsi zvokudya uye vatengi zvakananga.
Chinangwa ndechokuti vatengi ingashanda pamwe mugadziri zvakananga, pavaigona kutora chikepe chaienda retailers nezvimwe vanozoshanda zvisingagoni zvakazara kuzvidzora. Retailers kazhinji Kushapira musika simba ravo: Ivo kukuremedzai mitengo uye kwava vatengesi diki. Idambudziko zvakajairika kuti anogona kugadziriswa pamwe dzi mararamiro.
$42 miriyoni yaunganidzwa
The chirongwa anomirira Pfungwa decentralized pose supercomputer nokuda bvungapfunga kadambari. The decentralized uchishandisa maitiro pamusoro Ethereum pachikuva ndiye anokonzera Implementation ose kadambari mashandiro uye zvinogonekwa. ino ndiyo kushandiswa piece-software kuti anogona nokusangana zviuru kana kuti kunyange mamiriyoni makombiyuta kupota nyika kupinda rimwe kombiyuta Network. Izvi zvichaita kuti tikwanise kuita rekodhi-nokuputsa kunoguma chero mhando computation uye kunzwisisa, kana ari pakuverenga nhamba mamorekuru mune chimedu DNA mune zvokurapa, kana kuongorora nzvimbo kure, kana kutsvaka zvitsva mhando upenyu Panyika nemamwe mapuraneti.
Mari yakawanda panguva chiratidzo okutengesa
A mabviro decenter.org
Robotrading ndiye S. ...
Encrypted mameseji ...
Previous Post:ari ICO Market achachinja sei mu 2018?
Next Post:Blockchain News 8 Ndira 2018